helloSystem 0.6: iyo nyowani vhezheni yeFreeBSD-based operating system | Linux Vakapindwa muropa
Pamwe wanga usingamuzive, asi mhoroSystem iyo inonakidza yakavhurika sosi sisitimu inoshanda. Iyo yakavakirwa paFreeBSD uye inogadzirwa naSimon Peter, uyo akagadzirawo iyo AppImage package system. Ikozvino yakaburitsa vhezheni 0.6 yeiyi inoshanda system, yakavakirwa paFreeBSD 12.2.
Pamusoro pekuve nenheyo yakasimba iyo, helloSystem 0.6 zvakare ine zvimwe zvakanaka, senge zvakaenzana zvakafanana macOS' Iyo zvakare ine fanano kune mazhinji azvino GNU / Linux distros, ndiko kuti, isina yematambudziko echisikigo, kuitira kuti mushandisi agone kuve izere kutonga pasina musoro wakawandisa.
Unogona download ISO mufananidzo kubva helloSystem yemahara, inorema 1.4GB uye iwe unogona kuzviitira zvese zviri zviviri rodha rodha sekuyerera kwerwizi. Iwe unofanirwa kuziva kuti ine hombe assortment ye pre-yakaiswa software, sezvazvinowanzoitika ne distros. Iine panda-statusbar package kubva kuCyberOS, cyber-dock-based dock zvakare kubva kune iro rimwe boka rekuvandudza, Filer package maneja, uye Falkon browser pakati pevamwe.
Sezvo FS kana systemystem, shandisa ZFS nekutadza, kunyange ichitsigira exFAT, NTFS, ext4, HFS +, XFS, uye MTP. Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti akateedzana ezvivakwa zvekushandisa zveiyi purojekiti zvakagadzirwa, senge yekumisikidza, chigadziriso, chinhu chakachengetedzwa chekuchengetedza kukwira muti weFS, kudzoreredza ZFS dhata, interface yediski yekumisikidza, kumisikidzwa kwenetwork, nezvimwe. .. Ivo vanoshandisa mutauro wePython uye vanovakirwa pane raibhurari yemifananidzo yeQt.
Uye ikozvino neshanduro helloSystem 0.6 inosvika iine akawanda maficha maficha uye kugadzirisa zvine chekuita neshanduro yapfuura. Uye kana iwe uchifarira kuziva shanduko dzese mune iyi yazvino vhezheni, unogona kuona iyo kuzere kunyoresa pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » helloSystem 0.6: iyo nyowani vhezheni yeFreeBSD-based based operating system